पूर्व-सभामुख नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न : संविधानमा धारा ७६(५) किन लेख्नुभयो? - Malayakhabar
होम पेज फिचर पूर्व-सभामुख नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न : संविधानमा धारा ७६(५) किन लेख्नुभयो?
पूर्व-सभामुख नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न : संविधानमा धारा ७६(५) किन लेख्नुभयो?
काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा दलका नेताबाट बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा उठाइएका जिज्ञासाका जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) बारे अरूलाई भन्दा नेम्वाङलाई बढी थाहा भए पनि उहाँले त्यसको व्याख्या गलत ढंगले गरेको तर्क गर्नुभयो । आफूले त्यो कुरा सोध्न खोजेको तर नेम्वाङ भने जवाफ नै नसुनी प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिएको भन्दै देउवाले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यसूची थियो । यस्ता बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित सबै राजनीतिक दलका नेताहरू उपस्थित हुने परम्परा छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली भने उपस्थित हुनुभएको थिएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो । उपनेता नेम्वाङले थुप्रै प्रश्न उठाउनुभयो । रोष्टममा उभिएर करिब ५० मिनेट लामो भाषण गरेका उहाँले आफ्नो दलको एउटा समूहसँग गठबन्धन गरेको र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई वैधता दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । उहाँले राजनीतिक दलहरूले नयाँ संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर, उहाँ आफैँ भने प्रधानमन्त्रीमाथि आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नसुनी प्रतिनिधिसभा बैठक छोडेर बाहिरनुभएको थियो ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले दिएको बधाई तथा शुभकामनाप्रति धन्यवाद दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेम्वाङप्रति व्यंग्य गर्नुभयोे । ‘यहाँ विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्न । उपनेता, पूर्व–सभामुख पनि आफूले बोलेर संस्कृतिका कुरा गरेर जवाफ नसुनीकन हिँड्नुभयो,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘यो संविधानमा ७६ (५) किन लेख्नुभयो ? भनेर सोध्नेवाला थिएँ ।’
नेम्वाङले संविधान निर्माण भएपछि सार्वजनिक रूपमा राखेका धारणा स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयोे, ‘उहाँले अब कहिल्यै पनि यो संविधान भत्किने छैन, संसद् विघटन हुने छैन भनेको झल्झली सम्झन्छु ।’
जेठ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कुनै पनि सांसदले बहुमत पु¥याउन सक्नुहुन्छ भने दाबी गर्न आह्वान गरेको र सोहीअनुसर आफूहरू बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लगेर गएको देउवाले बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्मा विश्वासको मत लिन पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको देउवाको भनाइ थियो । त्यसो नगरे सांसदहरूको सनाखत गर्न सक्नेमा पनि त्यो नगरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ किन लेखिएको भन्ने पूर्व–सभामुख नेम्वाङलाई राम्रोसँग जानकारी रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसले ह्वीप जारी नगरेको तर काठमाडौं आएर आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न अनुरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो अनुरोध अन्य दलका सांसदलाई पनि गरिएको बताउनुभयो ।
कांग्रेसले विश्वासको मत लिने क्रममा ह्वीप जारी गरेको नेम्वाङले आरोप लगाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र त्यो जसरी पनि पूरा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘हामी ऋण लगेर, सापट लिएर भए पनि जति महँगो भएपनि नेपाली जनतालाई खोप पु¥याउने छौं ।’ सरकारले देखिने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘यो कार्यकालमा देखिने किसिमका काम गर्नेछौं ।’
सर्वोच्चको फैसलाले धेरै कुरा भत्कायो : नेम्वाङ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धेरै कुरा भत्काएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्चले परमादेश दिनुले राज्यका अंगबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्गत नभएकाले राज्यका अंगबीचको सन्तुलन गुमेको उहाँले बताउनुभएको हो ।
शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई दलका नेताको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना दिँदै नेम्वाङले फैसलाले धेरै कुरालाई भत्काउँदै प्रधानमन्त्री पदलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । अब राजनीतिक आन्दोलन गर्ने समय सकिएको भन्दै नेम्वाङले आफूहरू जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कुनै पनि विशेष काम गर्न नहुने भए पनि सरकारले विश्वासको मत लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । यस्तै, उपनेता नेम्वाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनाव नसार्न पनि आग्रह गर्नुभयो । नेम्वाङले जनादेश प्राप्त नभएकाले सरकारमा जान्नँ भन्ने शेरबहादुर देउवालाई अहिले बधाई दिनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो । संविधानले प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरेको र त्यो भनेको नागरिकको जनादेशबाट हुने गरेको नेम्वाङको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई गिरिजाको जस्तै छवि बनाउने मौका छ : गजुरेल
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पूर्व-प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तै छवि बनाउने अवसर आएको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्व-सभापति तथा पूर्व-प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा राम्रो छवि बनाएर गएको उल्लेख गर्दै नेता गजुरेलले वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि त्यो अवसर आएको बताउनुभयो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गजुरेलले भन्नुभयो, ‘उहाँले अब फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जो छवि बनाएर जानुभयो । त्यो छवि उहाँले कायम गर्नुपर्छ । इतिहासको समीक्षा गरेर कहाँ कहाँ त्रुटि भए, उहाँ पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, धेरै अनुभव पनि छ ।’ सांसद गजुरेलले संघीयताको गलत अभ्यास भएको भन्दै संविधानको मर्मअनुसारको संघीयताको अभ्यास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमाले नेता रावलद्वारा सांसद पदको राजीनामा फिर्ता
एमाले नेता भीम रावलले संसद् सदस्यबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिनुभएको छ । संसद् सचिवालयले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य रावलले राजीनामा फिर्ता लिएको पुष्टि गरेको हो । रावलले साउन ३ गते आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि एमालेका केही सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । संसद् भवनबाहिर सञ्चारमाध्यमका अगाडि राजीनामा पत्र पढेर सभामुखलाई राजीनामा बुझाउन गएका रावलले राजनीतिक विकृत भएकाले आफूले सांसद पद त्याग गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँलाई राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले रोक्न खोज्दा पनि नमानेर राजीनामा दिनुभएको थियो ।
अघिल्लो लेख शीर्ष कम्युनिष्ट नेताहरूको उद्घोषः वाम एकता अपरिहार्य, ओलीलाई नेपालले भने महाराजधिराज।
पछिल्लो लेख अख्तरको आरोपमाथि खड्का, मल्ल र लामाको आपत्ति।